Sunday August 24, 2008 - 15:28:50 in Maqaallo by Xarunta Dhexe
HAMBALYO “Midnimaa Wanaag Lagu Guntaa” waa buug cusub oo lagu soo aruuriyay maansooyinkii abwaankii aad wada taqiinneen ee Maxamad Gacal Xaayoow. Waana qeybtii koowaad ee suugaantii Maxamad Gacal Xaayoow oo ka kooban 25 maanso oo isu
HAMBALYO “Midnimaa Wanaag Lagu Guntaa” waa buug cusub oo lagu soo aruuriyay maansooyinkii abwaankii aad wada taqiinneen ee Maxamad Gacal Xaayoow. Waana qeybtii koowaad ee suugaantii Maxamad Gacal Xaayoow oo ka kooban 25 maanso oo isugu jira gabay, guuroow, shirib, masafo, iyo geeraar.
Maansooyinkaas ayaga ah oo intooda badani ku saabsan yihiin kuwii uu abwaanku tiriyay 18kii sano ee dagaallada sokeeye, waa maansooyin aad u qiimo leh oo tilmaamaaya taariikhinaayana dhacdooyinkii xilligaas asaga ah, kuwaas oo marka aad akhriso kuugu muujinaaya xaaladda ay ka hadlaayaan sidi muraayad oo kale ama kaa dhigaayaba sidi qof joogay meeshi ay ka dhacaayeen. Waxaana ka mid ah gabayada noocaas ah haddii aan wax uga soo qaato, -tusaale ahaan- gabaygii Su’aal Furan oo uu tilmaan ka bixinaayay sida jidgooyeyaashu (isbaarooleydu) ula dhaqmaan dadka:
Buuggaan loogu magac daray Midnimaa wanaag lagu guntaa oo ka kooban suugaan laga soo minguuriyay cajalado (giraamo) laga duubay abwaanka caanka ah ee Maxamed Gacal Xaayow, waa buug qiime iyo qaayo badan ku fadhiya. Buuggu waxuu xambaarsan yahay murti iyo maahmaahyo wanaagsan oo tusaaleynaya dhaqankii suubanaa ee somalida.
Sidoo kale markii la rabo in ummad tagtadeeda wax laga ogaado waxaa la tixraacaa suugaanta nuucyadeeda kala duwan oo ay laheyd ummaddaas. Suugaantu waxay iftiimisaa xilligaas la joogo wixii dhacayay, hiddaha iyo dhaqamadii xilligaas caanka ahaa iyo dhibaatooyinkii jiray, haddaba abwaanka oo ku gabya xaraf walba oo afsoomali ah kuna caan baxay wanaagga iyo waanada ayaa xilligan cakiran ee jirintaanka soomaaliduba yahay mid ay dhibaatooyin badani haystaan, ayuu abwaanku waxaa uu umadda xasuusinayaa dhaqamadii suubbanaa ee ay lahaayeen kuna waaninayaa wanaagga iyo wax wada qabsiga iyo in laga fogaado isqabqabsiga, qabyaaladda iyo kala qeybsanaanta, waxaadna arki doontaa markaad aqriso inuu gabyaagu la hadlay ummadda qeybaheeda kale duwan sida aqoonyahanka, odayaasha dhaqanka, dhallinyarada IWM, uuna ku baraarujinayo sidii soomaalidu ahaan jirtay iyo siday maanta tahay iyo waliba sidii xal waara loogu heli lahaa dhibka ka taagan gayigeenna soomaaliyeed.